Fanampiana ho an’ny Fandalinana
Ny Bokin’ i Môrmôna
Namepetra an’ i Môrmôna momba ny rakitsoratra masina i Amarôna—Niandoha ny ady teo amin’ ny Nefita sy ny Lamanita—Nesorina hiala ny Nefita Telo lahy—Nanjaka ny faharatsiana, ny tsy finoana, ny famosaviana ary ny famorehana. Tokony ho 321–326 taorian’ i J.K.
Nitarika ny miaramila Nefita i Môrmôna—Nandrakotra ny tany ny ra sy ny fandripahana—Nitoloko sy nitomany tamin’ ny alahelon’ ny voaozona ny Nefita—Lasa ny andron’ ny fankasitrahana azy—Nahazo ny takelak’ i Nefia i Môrmôna—Nitohy ny ady. Tokony ho 327–350 taorian’ i J.K.
Niantso ny Nefita hibebaka i Môrmôna—Nahazo fandresena lehibe ireo ary nankalaza ny heriny ihany—Nandà ny hitarika azy i Môrmôna, ary tsy niaraka tamin’ ny finoana ny fivavany ho azy—Manasa ny fokon’ i Isiraely roa ambin’ ny folo ny Bokin’ i Môrmôna mba hino ny filazantsara. Tokony ho 360–362 taorian’ i J.K.
Nitohy ny ady sy ny fandripahana—Ny ratsy nanafay ny ratsy—Nanjaka ny faharatsiana lehibe kokoa noho ny teo aloha teo amin’ i Isiraely manontolo—Natao sorona tamin’ ny sampy ny vehivavy sy ny ankizy—Nanomboka nifaoka ny Nefita teo anoloany ny Lamanita. Tokony ho 363–375 taorian’ i J.K.
Nitarika indray ny miaramila Nefita tamin’ ny ady feno ra sy fandripahana i Môrmôna—Hivoaka ny bokin’ i Môrmôna mba handresy lahatra an’ i Isiraely rehetra fa i Jesoa no Kristy—Noho ny tsy finoany dia haely patrana ny Lamanita, ary hitsahatra ny hitaona azy ny Fanahy—Handray ny filazantsara avy amin’ ny Jentilisa izy amin’ ny andro farany. Tokony ho 375–384 taorian’ i J.K.
Nivory teo an-tanin’ i Komôrà ho amin’ ny ady farany ny Nefita—Nanafina ny rakitsoratra masina tao amin’ ny vohitr’ i Komôrà i Môrmôna—Nandresy ny Lamanita, ary fongotra ny firenena Nefita—An’ hetsiny no voavono tamin’ ny sabatra. Tokony ho 385 taorian’ i J.K.
Nanainga ny Lamanitan’ ny andro farany i Môrmôna mba hino an’ i Kristy, hanaiky ny filazantsarany, ary ho voavonjy—Izay rehetra mino ny Baiboly dia hino koa ny Bokin’ i Môrmôna. Tokony ho 385 taorian’ i J.K.
Nihaza sy namongotra ny Nefita ny Lamanita—Hivoaka amin’ ny alalan’ ny herin’ Andriamanitra ny Bokin’ i Môrmôna—Voatonona ny loza ho an’ ireo izay mifofo fahatezerana sy adiady hanoherana ny asan’ ny Tompo—Hivoaka amin’ ny andron’ ny faharatsiana, ny fahalovana ary ny fivadihana ny rakitsoratra Nefita. Tokony ho 400–421 taorian’ i J.K.
Nanainga ireo izay tsy nino an’ i Kristy hibebaka i Môrônia—Izy dia nitory ny Andriamanitry ny fahagagana, izay manome fanambarana ary mampidina fanomezana sy famantarana amin’ ny mahatoky—Nitsahatra ny fahagagana noho ny tsy finoana—Nanaraka ireo izay nino ny famantarana—Namporisihina ny olona ho hendry sy hitandrina ny didy. Tokony ho 401–421 taorian’ i J.K.